French hypermarket uchungechunge "Auchan" kudala wafika emakethe Ukraine futhi wakwazi ukunqoba nokwethenjwa ngamakhasimende. Uphawu zonke izitolo we nenethiwekhi ngamanani aphansi. Lokhu etholwe ngenxa yokuthi inkampani akusho bachithe imali yokukhangisa, wakhetha ukunika yayo imikhiqizo amakhasimende izindleko okungabizi kakhulu. Kwamanye amadolobha, uzothola izitolo, "Auchan"? Kiev, laseDonetsk, Odessa, eLvov, Krivoy rog futhi Zaporozhye kakade uyaziqhenya lezi ezinkulu. Siyethemba inethiwekhi sizonwetshelwa.
Isitolo "Auchan" eKiev imelelwa Hypermarkets eziyisithupha, ngalinye elikwazi abathengi ukuthola konke okudingayo ukuze aphile ntofontofo, kusukela ukudla ukuze ifenisha namakhompyutha.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe inethiwekhi "Auchan" uwudondolo abayobe njalo ukusiza ikhasimende ukuthola umkhiqizo kwesokudla noma ukuthola ulwazi mayelana nalo. Njengoba sazi ukuthi umuntu endaweni esitolo kungenzeka ayizinkulungwane 15 square metres, okuyinto, isibonelo, has a esitolo "Auchan" e Kiev, oku Borshchagovka, usizo olunjalo uyisidingo.
Comfort iqala phambi kwesango lendlu "Auchan"
Uqondeni? Ukuze kube lula abathengi yokupaka elula kunazo eduze esitolo ngamunye "Auchan". Kiev - idolobha sezimoto, futhi kungenzeka ukuba bashiye izimoto zabo kuleli ibangana shopping isikhala kwenza lonke inqubo ukhululekile okuningi. Ngazo zonke amakhasimende inkampani inikeza isevisi khulula ibhasi, ezihlanganisa cishe wonke umuzi. Bagijima njalo ngezikhathi imizuzu 30.
Imikhiqizo okwethulwa ezitolo, wathenga zombili kubakhiqizi bendawo bese ezivela kwamanye. ukunakwa okuningi ikhokhelwa control ikhwalithi yezimpahla kanye freshness yonke imikhiqizo, kungakhathaliseki ezweni lendabuko - ngabe amazambane kusukela le Kherson esifundeni , noma inhlanzi kusukela esifundeni aseBaltic.
Amanani entengo yonke imikhiqizo agcinwa isikhundla elihle kunawo, uma kuqhathaniswa nezinye ezinkulu eKiev. Ngokwesibonelo, pink amazambane kubiza 2,79 UAH, pink utamatisi - 19.99 UAH, nesinkwa Ukrainian - 6,48 UAH.
Futhi, zonke esitolo "Auchan" has yokubhaka ayo e Kiev, ngakho isinkwa namakhekhe zihlale fresh.
Asikho isikhathi ukupheka?
Kuleli zwe lanamuhla ukuntula ezibaluleke kakhulu - ngalesi sikhathi. Umsebenzi, ibhizinisi, ngokuvamile, okwenza imali ithatha isikhathi esiningi nokuzikhandla, futhi ukupheka ine akekho noma nezinye. Isizukulwane abasebancane nje ayisetshenziswa ukupheka futhi lukhetha ukuchitha isikhathi sakhe sokuphumula kuphi, hhayi kuphela e-isitofu.
Labo abazazisayo isikhathi sabo noma nje ungathandi ukupheka, kukhona Ukukhetha eziningi ukudla ngomumo kusuka ukupheka abo "Auchan". Amanani nazi yinto emnandi ababengayilindele. Futhi, zonke esitolo kukhona cafe lapho ungakwazi ngokushesha uthole isidlo noma inkomishi yekhofi. Phela, nakwentiwa nawo uyadingeka.
Zonke Izitolo sasesiqhutshelwa akwabelanayo amaqembu zemikhiqizo eyahlukene. Lokhu kwenza amakhasimende ukukhokha ngisho kancane lapho uthenga imikhiqizo zakho ozithandayo futhi izimpahla. Njalo isivakashi ungathola Hypermarkets enhle bazuze isenzo "Auchan". Kiev - zamadolobha ezibizayo, ukuze iziphakamiso ezinjalo ibhonasi wanezela amakhasimende avamile.
Ukuze akhokhele ngisho ngaphansi izinga olufanayo lwemikhiqizo, ukumane nje uyazi yonke amasheya, elibamba "Auchan". Kiev - umuzi omkhulu, kodwa uyazama ukuthola isikhathi ukuya esitolo futhi ukuthola mayelana Izipesheli. Consultants Izokwazisa mayelana ukukhushulwa oluzayo, futhi ungakwazi ukuhlela ukuthenga kwakho ngendlela enenzuzo kakhulu kuye.
Zonke izinto zibe lula kuwena
Isikhala engaphakathi ezitolo kuhlelwe ukuze izivakashi bangazizwa kahle ngangokunokwenzeka lapho siya ezitolo. Ngaphezu amathilomu nezindawo zokudlela, kukhona amabhentshi ukhululekile, ikhono ukushaja ifoni kanye ne-laptop, sebenzisa khulula Wi-Fi. Izivakashi abeza nezingane zabo, mahhala ukusebenzisa lokudlala. Futhi kubathengi abasha kakhulu unina futhi igumbi ingane.
Hypermarkets ukuphatha njalo ophethe ezinezihloko ukuzijabulisa izenzakalo, okuyinto thatha wonke umuntu ohilelekile. Lezi zenzo zivame okuhloswe ngazo ukusekelwa kanye nokuthuthukisa izingane. Imicimbi aphethwe ngefomethi workshop, imibukiso kanye nemibukiso.
Zonke izivakashi esitolo "Auchan" ongabamba iqhaza kule misebenzi nezingane zabo. Basimema Animators professional kanye abaculi kubahlanganyeli ushiye umbono omuhle kakhulu. Kulokhu, nokuphathwa esitolo ngamunye ivumelane show yabo izinhlelo siqu noma workshop ukuthi musa uqondane nomunye.
Ukuthenga endaweni ngayinye hypermarket "Auchan" bayakuvumela ukubeka ngaphansi kophahla olulodwa ezihlukahlukene kwamanye yezitolo nokuzijabulisa zemicimbi. Osebeni lomfula ngokuvamile kuba igalari izitolo, amathilomu nezindawo zokudlela. Lapha ungakwazi ukujabulela ikhofi noma oda sushi, kodwa ungathola isipho enkulu ngoba kothandekayo.
Lonke yezitolo ezitaladini ukunikela isigaba umkhiqizo ukuthi underrepresented ku "Auchan": izingubo, izicathulo, kwezimonyo namakha, izesekeli, izitsha kanye eziyizikhumbuzo, amakhompyutha kanye electronics. Kukhona ezihlukahlukene nemikhiqizo yomhlaba jikelele kumakhasimende kwanoma iyiphi ezingeni engenayo. Izivakashi nethuba ukuthenga konke ngesikhathi esisodwa.
Futhi kukhona: ekhemisi, izindlu zangasese, izicathulo ukukhanda, ezikhumulweni izinkokhelo electronic, ibhange, exchange. Ngokuvamile, konke ungase udinge i ukuhlala enwetshiwe nezitolo.
Ngaphambi ukuyothenga, hlola amahora zokusebenza esitolo esiseduze nawe, ngoba zihlukile. Ngezansi amakheli kanye namahora okuvula ezitolo "Auchan" (Kiev).
Stores "Auchan" eKiev
(044) 585-95-35, 585-95-36 - ifeksi
Gorky Street. (Antonovicha) 176
Jikelele Vatutin Prospect, 2
Iningi District Str., 4
Ukuze osomabhizinisi isikhala kudayiswa Hypermarkets "Auchan" kukhona inketho kunenzuzo kakhulu, kusukela inqubomgomo inkampani, okuhloswe ngaso okwenza izinzuzo abathengi, edonsela inombolo nenqwaba yabantu. Ungathola ezihlukahlukene imikhiqizo noma imikhiqizo ethile ukuthi ungekho ku hypermarket, kodwa athandwa namakhasimende, "Auchan", bese uqala ukuthengisa kubo. Uma amakhasimende yanelisekile, e win-win zonke.
Uma kukhona idolobha namanje akukho esitolo lokhu inethiwekhi, kuba okwesikhashana. Umgomo yenkampani - ukuvula Hypermarkets kuzo zonke izifunda Ukraine "Auchan". Kiev, Odessa nakwamanye amadolobha amane - kumane nje kuyisiqalo.
Mantis Iduna nensikazi
Ngingayithola kanjani ukwakha Gazebo kusukela tube okwenyanga?
Uhlamvu Skyforge - Paladin. Hyde paladin